“Apostoly sandoka izy ireny, milaza lainga momba izay ataony, ka miova endrika ho apostolin’i Krsity. Tsy mahagaga izany satria hain’i Satana aza ny miova endrika ho anjely mamirapiratra” 2 Kôr. 11:13,14
Mahery ny fahamarinana, ary manova ny saina hanahaka ny endrik’i Jesosy ny herin’izany amin’ny alalan’ny fankatoavana. Ny fahamarinana ao amin’i Kristy no mamelombelona ny feon’ny fieritreretana sy manova ny saina; satria ao anatin’ny fo aminn’y alalan’ny Fanahy Masina izany. Maro ireo izay, noho ny tsy fahaizany mandanjalanja ara-panahy no maka an-tendrony ny Teny ary hita fa tsy omban’ny Fanahin’Andriamanitra, ka tsy mamelombelona ny fanahy izany sy tsy manamasina ny fo. Mety ho misy afaka manao tsianjery ny TT sy TV, mety ho mahalala tsara ireo didy sy teny fikasana ao amin’ny Tenin’Andriamanitra, fa raha tsy ny Fanahy Masina no mametraka ny fahamarinana ao am-po, manazava ny saina amin’ny alalan’ny fahazavana avy any an-danitra, dia tsy misy na fanahy iray aza no torotoro eo ambonin’Ilay Vatolampy; fa ny iraka avy any an-danitra no mampifandray ny fanahy amin’Andriamanitra.
Raha tsy misy fahazavana avy amin’ny Fanahin’Andriamanitra dia tsy ho afaka hanavaka ny marina amin’ny diso isika, ary ho latsaka amin’ny fanapahan’ny fakam-panahy sy ny fitaka nentin’i Satana teto amin’izao tontolo izao. Manakaiky ny fiafaran’ny fifanandrinana eo amin’ny Andrianan’ny mazava sy ny andrianan’ny maizina, ary tsy ho ela dia hizaha toetra ny finoantsika ny famitahan’ny fahavalo, haneho marina ny tena toetran’izany. Hanao fahagagana eo imason’ny bibidia i Satana, ary hamitaka “izay monina ambonin’ny tany izy amin’ny famantarana izay nomena azy hatao eo imason’ny bibidia (...)” Apôk. 13:14
Fa na dia hiasa aza ny andrianan’ny maizina hanarona ny tany amin’ny fahamaizinana, ary ny olona amin’ny fahamaizinana mikitroka, dia haneho ny heriny manova fo ny Tompo. Misy asa tokony hotanterahina ety an-tany sahala amin’izay nitranga tamin’ny firotsahan’ny Fanahy Masina tamin’ny andron’ny apôstôly, rehefa nitory an’i Jesosy sy Izy voahombo izy ireo. Maro no niova fo tao anatin’ny andro iray; fa handroso amin-kery ny hafatra. Ary voalaza fa : ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin’ny teny ihany, fa tamin’ny hery koa sy ny Fanahy Masina” 1 Tes. 1:5. Ny Fanahy Masina no mitaona ny olona ho eo amin’i Kristy, satria Izy no mandray ny zavatra momba an’andriamanitra ary maneho izany amin’ny mpanota. Hoy i Jesosy: “Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin’ny ahy Izy ka hanambara izany aminareo” Jao. 16:14